Duulimaadka FLY Dubai o ka howl-bilaabay Somailand – Radio Daljir
Duulimaadka FLY Dubai o ka howl-bilaabay Somailand
Juunyo 10, 2015 2:24 b 0
Arbaco, Juun 10, 2015 (Daljir) — Shirkadda diyaaradaha Fly-dubai ayaa duulimaadkeedii ugu horreeyay ku tagtay shalay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland, iyadoo wadday wafdi ka socda shirkadda Fly-dubai oo uu Hoggaaminayay Madaxa Fulinta Shirkadda, Ghaith Al Ghaith oo ay wehlinayeen madaxweyne ku xigeenka ganacsiga ee Qaaradda Afrika, Sudhir Sreedharan.
Wafdiga ayaa waxaa kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Igal International Airport madaxweyne ku xigeenka Somaliland, C/raxmaan C/llaahi Ismaaciil (Saylici) iyo Wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada ee Somaliland, Maxamuud Xaashi Cabdi.
“Ujeedadeena waa mid aan ku doonayno inaan siino shacabka Somaliland ku nool adeegyo Diyaaradeed oo ku filan, iyagoo Duulimaadyo toos ah ku tegi doona Hargeysa. Sidoo kale, waxay tani fursad u siinaysaa Soomaalida ku nool dibadda inay booqdaan Qoyskooda iyo Saaxiibbadood Somaliland ku nool,” ayuu yiri Ghaith oo intaa raaciyay in diyaaradahoodu ay duulimaadyo ku tagaan 250 goobood oo caalamka ah, dulimaadyada aan Hargeysan ku imaan doonana waa mid cusub.
Sidoo kale, Madaxa Fulinta ee Shirkadda Fly-dubai oo ka Hadlayay Duullimaadyada ay ku imaan doonaan Hargeysa ayaa Sheegay in ay Rakaabkooda siin doonaan Waayo-aragnimo raaxo badan iyo safar gaar ah. Isagoo intaas ku daray in xamuulkooda ay u u heli doonaan waddo cusub. Wuxuuna xusay inay rakaabka geyn doonaan dalal badan oo caalamka sida; Afrika, Bariga Dhexe, Yurubta Bari, Raashiya, Aasiyada Dhexe iyo dalal kale oo caalamka ah.
Madaxweyne ku xigeenka Ganacsiga Qaaradda Afrika ee shirkadda Fly-dubai ayaa isaguna yiri. “Fly-dubai Waxaa ka go\_’an inay Aasaasto safarro ganacsiga iyo dalxiiska, furasaddana waa mid muhiim u ah adeegyada xamuulka iyo fursadaha ganacsiga ee Hargeysa iyo Dubai iyo meelaha kale ee aan duulimaadyada ku tagno.”
Diyaaradaha Shirkadda Fly-dubai ayaa xustay inay toddobaadkiiba Afar duulimaad ku tegi doonaan magaalada Hargeysa, iyadoo kazoo duulaysa magaalada Dubai, iyadoo Madaxdu ay sheegeen in duulimaadyadu ay billowdeen maanta oo ah 09-ka Juun, 2015-ka.
“Waxay Duullimaadyadu ka billaabanayaan Garoonka Hargeysa Saacaddu marka ay tahay 07:35 Subaxnimo, waxayna ka dagaysaa Dubai saacaddu marka ay tahay 12:15. Sidoo kale Diyaaraddu Waxay kasoo Duuli doontaa Garoonka Dubai Saacaddu marka ay tahay 04:05 habeennimo, iyadoo ka degi doonta Garoonka Hargeysa 06:35 subaxnimo,” ayaa lagu yiri warbixinta ay maanta soo saartay shirkadda diyaaradaha Fly-dubai.
Dhanka kale, Waxaa Warbixinta Shirkadda looga Hadlay Kharashaadka Rakabaabka laga qaadi doono, kuwaasoo ah in marka laga duulayo Hargeysa loona socdo Dubai waxaa laga billaabayaa 610 Doollar oo ay ku jiraan 20-kg Xamuulka Boorsooyinka ah, iyadoo Heerka Ganacsiga Qarashka uu ka bilaabanayo USD 1,100 oo ay ku jirto canshuuraha oo ah 40-kg oo xamuullada boorsooyinka ah.
Tigidhada Duulimaadyada Fly-dubai ayaa la sheegay in laga iibsan karo Websaydka Fly-dubai (flydubai.com). waxaana warbixinta lagu xusay in shirkadda fly-dubai ay duulimaad-yadeeda billowday Sannadkii 2009-kii.
Madaxweynaha Somaliland, C/raxmaan Saylihi oo isaguna ka hadlay goobta ayaa xusay in ay soo Dhaweynayaan Duulimaadyada ay Shirkadda Fly-dubai ku imaan doono Hargeysa, isagoo xusay inay shirkado kale oo cusubna ay rajeynayaan inay duuulimaadyadan oo kale ay ku yimaadaan Somaliland.
Ugu dambeyn, Warbixinta Shirkadda ayaa lagu Xusay inay Duullimaadyo ku Tagaan in ka badan 45 waddan oo Calaamka ah, Diyaaradaha ay Shirkaddu leedahayna ay gaarayaan 48 Diyaaradood oo cusub noocooduna yahay Boeing 737-800, laakiinse Sannadka 2023-ka ay gaarsiin doonaan diyaaradahooda illaa 100 xabo.